Should I FileaDivorce Paper? | Nepal Hypnosis Clinic and Training
कतिपय बन्धनहरू मानिसका लागि स्वस्थकर हुन्छन् । जसका कारण उसले आफूलाई सुरक्षित, महत्वपूर्ण र जिम्मेवार महसुस गर्छ । व्यक्तित्व विकासमा थप ऊर्जा पाएका कारण गतिशील हुन्छ । उसले बन्धनमा पनि स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न सक्छ । मानिसले आफ्नोरहरले सम्बन्ध जोड्दा बन्धनलाई स्वीकार गर्न सक्छ र बन्धनभित्रै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सिक्छ । अस्तित्व बचेका कारण ऊ आफूसँग सन्तुष्ट हुन्छ र उसको सम्बन्धमा पनि मिठास आउँछ ।
जब मानिस बाध्यताले बाँधिन्छ, उसका रहर इच्छा, आकांक्षाकाई सम्बन्धका डोरीहरूले जबर्जस्ती बाँध्छन्, तब उसमा हीनताबोध हुन्छ । इच्छाविरुद्ध गरिएका कुनै पनि कार्यले सफलता हासिल गर्न सक्दैन । अनि फेरि असफलताका कारण आत्मबल र आत्मविश्वासमा ह्रास आउँछ । आत्मबल घट्नाले अरूबाट उपेक्षित हुने डर र शंका बढ्छन् । हरेक नराम्रा घटनाका लागि आफैंलाई दोष दिने कारण आफैंलाई घृणा गर्न थाल्छ । अनि आफैंले घृणा गरेका कारण अरूको प्रेमलाई पनि महसुस गर्न सक्दैन । जसका कारण तनाव उत्पन्न हुन्छ र सम्बन्धमा गिरावट आउँछ । आफैंसँग तनावग्रस्त रहेको मानिस अरूसँग घुलमिल गर्न सक्दैन । ऊ एक्लो भएको महसुस गर्न थाल्छ र विस्तारै सबैसँग अलग्गिएर बस्न थाल्छ । यसरी एक्लै बस्दा उसको मनमा अनेकथरि नराम्रा सोचविचार आउन सक्छन् अनि उसमा समस्या देखापर्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा अरूले पनि उसलाई अपहेलना गर्ने, गाली गर्ने, दोष लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्यो भने त झन् उसमा विषाद (डिप्रेसन) नै उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा उसका कुराहरू सुनेर उसलाई साथ दिनुपर्छ । उसलाई उसको महत्व र अस्तित्व बुझाइदिनुपर्छ । उसलाई बुझ्नुपर्छ र उसका भावनालाई कदर गर्नुपर्छ ।
मानिसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको सोचमा हुन्छ । जब उसले आफूलाई महत्वपूर्ण र जिम्मेवार सोच्छ, त्यतिबेला ऊ जतिसुकै जटिल काम गर्न पनि सबल र सफल हुन्छ । त्यसैगरी, जब मानिसले आफूलाई व्यर्थ, कमजोर अनि अस्तित्वहीन सोच्छ, उसको सोचका कारण उसको शक्ति साँच्चै नाश हुन्छ र ऊ कमजोर बन्न पुग्छ । ऊ एक्लो महसुस गर्न पुग्छ र असक्षम हुन पुग्छ ।
त्यसकारण मानिसले ठीक समयमा सही विचारलाई सही ढंगले सोच्यो भने उसमा सकारात्मक शक्तिको विकास हुन्छ र ऊ आफ्नो सोचअनुसार कार्य गर्न सफल हुन्छ । सफलताका कारण उसको अस्तित्व जोगिन्छ । यसरी ऊ आफूसँगै खुसी हुन्छ । फलस्वरूप ऊ अरूलाई पनि खुसी दिन सक्छ । आफ्नोअस्तित्व सँगसँगै अरूको अस्तित्वको पनि कदर गर्न सक्छ जसका कारण सम्बन्धमा सुधार आउँछ ।
तपाईं एकदमै सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईंले आफ्नोजिन्दगीको लामो समय अर्काका लागि दुःखमा बिताउनुभएको छ । श्रीमती र छोराछोरीप्रतिको जिम्मेवारी महसुस गरेर आफ्नोव्यक्तिगत खुसीलाई त्याग गर्नुभएको छ । यसर्थ, तपाईं अत्यन्तै सहनशील र धैर्यवान् हुनुहुन्छ । तपाईंको श्रीमतीसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारण तपाईंलाई दुःख भइरहेको छ । आफूले दुःख पाएको अवस्थामा, जिन्दगी गुजार्नुपरेको बेलामा श्रीमतीसँग रिस उठ्नु, छोडेर एक्लै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच आउनु स्वाभाभिक हो । लामो समयसम्म निरश जिन्दगी बाँच्नु अत्यन्तै कठिन कार्य हो । यर्सथ पनि तपाईं संर्घषशील र आशावादी हुनुहुन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा तपाईंहरूको सम्बन्ध राम्रो नहुनुको कारण के हो ? के कुराले तपाईंहरूलाई नजिक हुनबाट रोकिरहेको छ ? अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईंहरू बीचमा यो विषयलाई लिएर केही छलफल भएको छ कि छैन ? यदि छ भने कस्तो छलफल भएको छ ? छैन भने के कारणले भएको छैन ? तपाईंहरूको दैनिक जीवन कसरी बितिरहेको छ ? कति समय सँगै बिताउनुहुन्छ ? तपाईं के काम गर्नुहुन्छ ? कति समय गर्नुहुन्छ ? तपाईंकी श्रीमती के काम गर्नुहुन्छ र कति समय गर्नुहुन्छजस्ता विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुहोस् । तपाईंको रुचि तथा चाहना के हो ? तपाईंलाई के गर्न मन लाग्छ ? अनि मनलागेको काम गर्न कति सफल हुनुहुन्छ ? भन्नेजस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस् । तपाईंको पारिवारिक समस्याले तपाईंको स्वास्थ्यमा केही असर परेको छ कि छैन ? छोराछोरीलाई तपाईंहरूको सम्बन्धको बारेमा थाहा छ कि छैन ? छ भने कति हदसम्म थाहा छ ? उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहने गरेको छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ । त्यसैगरी, तपाईंको श्रीमतीको इच्छा, उनको व्यक्तित्व तथा प्रकृतिका साथै उनको भावना कस्तो छ भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ ।
एकपटक शान्त वातावरणमा एक्लै बसेर आफ्ना हरेक सानासाना इच्छा, रहर र खुसीहरूको बारेमा सोच्नुहोस् । आफ्नो बानी-व्यवहारको बारेमा पनि मनन गर्नुहोस् । आफूले गर्ने हरेक कार्यलाई विचार गर्नुहोस् । आफूभित्रका चाहनालाई बुझ्नुहोस्, आफ्नोव्यक्तित्व चिन्नुहोस् र आफ्ना सबै क्षमताको पहिचान गर्नुहोस् । स्वास्थ्य, रुचि, चाहना, अठोट, संकल्प, विश्वास, आत्मसम्मानको अवस्थाको बारेमा विचार गर्नुहोस् । साथै खानपिन, व्यायाम, स्वहेरचाहको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर हुनुहोस् अनि आफू कति सन्तुष्ट छु भन्ने प्रश्न आफैंलाई गर्नुहोस् ।
यसरी तपाईंलाई आफ्नोबारेमा सूक्ष्म-सूक्ष्म कुराको पहिचान हुनेछ । तपाईंको सम्बन्ध राम्रो नहुनुको कारण पनि पत्ता लाग्न सक्छ । जब समस्याको कारण पत्तालाग्छ, तुरुन्तै समाधानको उपाय पनि पत्ता लाग्न सक्छ । त्यसो हुँदा तपाईंको समस्याको समाधान भेटिन्छ । यदि, यति गर्दा पनि तपाईंमा कुनै परिवर्तन आएन र समस्याले तपाईंलाई सताइरहृयो भने तपाईंले यथाशक्य छिटो नजिकको मनोविमर्शकर्तासँग सम्पर्क राख्नुहोला । मनोविमर्शपश्चात् तपाईं आफूलाई खुसी पाउनुहुनेछ । धन्यवाद ।
06/22/2011 - 15:15